Shariif Xasan: “Jubaland iyo K.Galbeed waxa ay iska kaashanayaan dagaalka Al-shabab” | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Shariif Xasan: “Jubaland iyo K.Galbeed waxa ay iska kaashanayaan dagaalka Al-shabab”
Shariif Xasan: “Jubaland iyo K.Galbeed waxa ay iska kaashanayaan dagaalka Al-shabab”
Madaxweynaha Maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan oo ku sugan Magaalada Kismaayo ee Xrunta KMG u ah Maamulka Jubaland ayaa sheegay in labada maamul ay iska kaashanayaan dagaalka ka dhanka ah Al-shabaab.
Shariif Xasan oo xalay magaalada Kismaayo kulan gaar ah kula qaatay madaxweynaha Maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam,ayaa waxaa ay ka wada hadleen iskaashiga labada maamul ee dagaalka ka dhanka ah Al-shabaab.
Labada dhinac oo oodwadaag ah ayaa isla soo qaaday sidii ay isaga kaashan lahayeen in ay ka guuleystaan Al-shabaab oo ay kula dagaallamaan degaannada ay ka jiraan Maamulladooda.
Madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa sheegay in iskaashi dhexmara Maamullada Jubaland iyo Koonfur Galbeed uu muhiim u yahay in ay si wadajir ah uga guuleystaan AL-shabab,islamarkaana nabad ku soo dabaalaan degaannada ay ka arrimiyaan.
Madaxweynaha Jubaland ayaa Magaalada Kismaayo labo Todobaad ka hor uga dhawaaqay shir ay yeelanayaan Madaxweynayaasha maamul Goboleedyada ka jira Soomaaliya,kaas oo uu sheegay in looga hadlayo sidii xal waara looga gaari lahaa khilaafka awoodeed ee dowladda dhexe iyo dowlad Goboleedyada ka jira Soomaaliya.